Farming Simulator 18 1.4.0.6 - Google - OES3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.0.6 - Google - OES3 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Farming Simulator 18
Farming Simulator 18 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စိုက်ပျိုးရေး Simulator 18 အတွက်ခေတ်မီလယ်သမားဖြစ်လာ! ကြီးမားတဲ့ပွင့်လင်းကမ်ဘာပျေါတှငျကိုယျ့ကိုယျကိုကိုဗတ္တိဇံနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံအများအပြားအမျိုးအစားများကိုရိတ်, သင့်မွေးမြူရေးဂရုစိုက် - နွားတွေ, သိုး, ဝက် - သစ်တောအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, သင်၏လယ်ယာချဲ့ထွင်ဖို့ဒိုင်းနမစ်စျေးကွက်ပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချ!
Challenger, Fendt, Massey ဖာဂူဆန်နှင့် Valtra: သင်သစ္စာရှိရှိ AGCO ရဲ့အများဆုံးလေးစားဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များ၏ 30 ကျော်ကနေ recreated, 50 ကျော်လယ်ယာစိုက်ပျိုးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပစ္စည်းကရိယာများနှင့်စပါးရိတ်ရာကာလသကြား beet, အာလူး, ဂျုံ, canola, ပြောင်းဖူးမောင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နကွောဘို့။
နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ခြင်း simulation အတွေ့အကြုံ, တစ်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ကမ္ဘာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကစက်တွေအပါအဝင်မော်တော်ယာဉ်၏ကျယ်ပြန့်ရေတပ်နှင့်အတူစိုက်ပျိုးရေး Simulator 18 အစဉ်အဆက် created အရှိဆုံးပြည့်စုံလက်ကိုင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း simulation သင်္ဘောသငျသညျဖိတျချေါ!
စိုက်ပျိုးရေး Simulator 18 အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
•စက်ရုံနှင့်စပါးရိတ်ရာကာလခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောကောက်ပဲသီးနှံများ: ဂျုံ, canola, ပြောင်းဖူး, သကြား beet, အာလူးများနှင့်နေကြာ
•ထုတ်လုပ်ရန်သင့်ရဲ့နွားတွေသိုး Feed နှင့်ရောင်းချနို့နှင့်သိုးမွှေး
• Bale သို့မဟုတ်သစ်သားပို့ဆောင်သည့်အခါသစ်မျက်နှာစာ loader ကို attachment များကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများတိုးချဲ့
•ပိုကောင်းရလဒ်အတွက် AI အကူမသောသူကိုစီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဦးတည်ရာကိုရန်သင့်မော်တော်ယာဉ်များမောင်းနှင်ပါစေ
•နယူး 3D ဂရပ်ဖစ်သင့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းနှင့်တောင်ပိုင်းကိုအမေရိကန်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ပို. ပင်အသေးစိတ်ပြသ
• Wi-Fi နှင့် Bluetooth များအတွက်ဒေသခံ multiplayer mode မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Play
Farming Simulator 18 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Farming Simulator 18 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Farming Simulator 18 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Farming Simulator 18 အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 94
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 38
kitiapps စတိုး 2.01k 1.68M
Farming Simulator 18 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Farming Simulator 18 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.0.6 - Google - OES3
ဗားရွင္း: 1.4.0.6 - Google - OES3
Release date: 2019-07-30 11:23:47
လက်မှတ် SHA1: DD:BB:84:3F:63:C6:9B:5E:A1:A7:5C:A8:5E:60:44:DA:49:60:C8:C1
အဖွဲ့အစည်း (O): GIANTS Software
နယ်မြေ (L): Zurich-Schlieren
Farming Simulator 18 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ